Margarekha चाडपर्व लक्षित प्रहरी अपरेशन – Margarekha
चाडपर्व लक्षित प्रहरी अपरेशन
जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाँकेले चाडपर्वको समयमा नियन्त्रणमा लिएका विभन्न घट्नाहरुको पत्रकार सम्मेलन गरी जानकारी गराएको छ । सोमबार हतियार सहित ३ जना व्यक्ति पक्राउ गरेको बाँके प्रहरीले यस अवधिमा घटेका बिभिन्न घटनाक्रमहरुको समेत जानकारी गराएको हो ।
अवैध रुपमा हातहतियारको कारोबार हुँदै गरेको गोप्य सूचनाको आधारमा नेपालगंज उपमहानगरपालिकाको २२ पुरैनीमा चेकजाँचका क्रममा एक थान कटुवा पेस्तोल सहित तिन व्यक्ति प्रकाउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रमुख एसपी टेक बहादुर तामाङ्गले जानकारी दिए । पक्राउ पर्नेहरुमा पुरैनीका श्यामता लोनिया, डुडुवा गाँउपालिका वडा नं. ३ सुलालपुरुवाका बाबुलाल पासी र सोही गाँउपालिका वडा नम्वर ४ झुन्डापुरुवाका शेल अलि रहेका छन् । उनिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
यसैबिच भारतबाट नेपाल ल्याउदै गरेको अवस्थामा बाँकेका विभिन्न बोर्डर क्षेत्रबाट ६५ ग्राम पटका नियन्त्रणमा लिईएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराईएको थियो । त्यसैगरी विभिन्न ठाँउमा जुवा खेल्ने क्रममा प्रकाउ परेका जुवाडेहरुलाई समेत प्रहरीले मुद्धा चलाएको छ । चाडपर्वलाई लक्षित गर्दै प्रहरीले विभिन्न ठाँउमा छापा मारी १ लाख ६ हजार ८३ रुपैंया पनि बरामद गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । नेपालगंञ्ज उपमहानगरपालिका वडा नं. १८ रनियापुरबाट सोही गाँउपालिकाका राजेश वर्मा, लिद्धी खटीक, मनोज कुमार शोनखर, विकाउ काढीलाई जुवा खेलीरहेको अवस्थामा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । त्यसैगरी जानकी गाँउपालिका वडा नम्वर ६ मा बाट राजारामा चौहान, नरे चौहान, सन्तोष चौहान र विहारी चौहानलाई नियन्त्रणमा लिई मुद्धा चलाइएको प्रहरीले जनाएको छ ।
त्यस्तै दशैतिहारकै बिचमा जिल्ला प्रहरीले ५ ग्राम लागु औषध ब्राउन सुगर सहित ३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो नेपालगञ्जको टोलीले कोहलपुर नगरपालिका ९ पिपरीमा लागुऔषध कारोबारको सूचनाका आधारमा ३ जना पक्राउ गरीएको हो । पक्राउ पर्नेहरुमा कोहलपुर नगरपालिका १० का गौरी शंकर थारु, वडा नं. ९ कै जेके चौधरी र १४ बर्षिय बालक विपी लामा पनि रहेका छन ।
यसैबिच जिल्ला अदालत बाँकेबाट जवरजस्ती करणीमा मुद्धा खेपिरहेका अभियुक्त एक बर्षपछी प्रकाउ परेका छन । ४ बर्ष ११ महिना ६ दिन जेल सजाय पाएका र फरार अवस्थामा रहेका साविक वनकटवा गाविस ४ जि गाँउका विजय सुनारलाई प्रहरीले प्रकाउ गरेको हो । पक्राउ परेका सुनारलाई कारागार नेपालगञ्जमा चलान गरीएको छ ।
३० आश्विन २०७४, सोमबार १९:०९ प्रकाशित